तनहुँ जलविद्युतले कतिलाई रोजगारी दिन सक्ला ? (अन्र्तवार्ता) – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun तनहुँ जलविद्युतले कतिलाई रोजगारी दिन सक्ला ? (अन्र्तवार्ता) – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
दमौलीः ऋषिङ १ मा तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहको काम चलिरहेको छ । एक सय १० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित आयोजनाको काम शुरु हुन समय लागेकाले गति सुस्त छ । बाँधस्थलको यस अघिको ठेक्का रद्ध भएर नयाँ ठेक्का आह्वान भए पछि कम्पनी छनोटको प्रक्रियामा रहेका कारण दुवैतर्फको काम एकै साथ नभए पनि थालिएको काम भने निरन्तर भैरहेको आयोजनाको भनाई छ ।
आयोजनाको काम शुरु हुनासाथ धेरै तनहुँवासीको चासो रोजगारसँग जोडिएको छ । आयोजनासँग जोडिएका काममा रोजगारी पाउने लालसा देश तथा विदेशमा भएका जिल्लावासीको पनि छ ।
आयोजनाले भने दक्ष र प्राविधिक कर्मचारी सम्भव भएसम्म जिल्ला र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई दिने बताउँछ । आयोजनाका प्रमुख अच्युतबाबु घिमिरेसँग दमौली न्यूजले गरेको अन्र्तवार्ता
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको ७ माघ २०७७, बुधबार १९:५३ 1744 Viewed